अंकित मूल्यको तीन गुणासम्म फिर्ता गर्ने सम्भावना छ «
हिमालयन बैंकमा २२ वर्षभन्दा धेरै उच्च पदमा रहेका जिम्मेबारी पूरा गरिसकेका नवराज गिरी पछिल्लो समयमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सहायक कम्पनी सीआईबीएल क्यापिटलको नेतृत्व सम्हालेका छन् । सीआईबीएल क्यापिटलको नेतृत्व सम्हालेका गिरी पछिल्लो समयमा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी कोषको दोस्रो योजना अर्थात सिटिजन्स म्युच्युअल फन्ड–२ को बिक्री गर्ने तयारीमा छन् । क्यापिटलले यसभन्दा अघि ८२ करोड रुपैयाँबराबरको सिटिजन्स म्युच्युअल फन्ड–१ योजना व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सामूहिक लगानी कोषले सानो पुँजी भएका लगानीकर्तालाई एकीकृत गरी संस्थागत रूपमा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने गिरीको भनाइ छ ।
आगामी दिनमा सेयर बजारले पनि बढ्ने संकेत गरेको हुँदा दोस्रो योजनानका एकाइ धनीले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रतिफल पाउने सम्भावना उच्च रहने उनको विश्लेषण छ । दोस्रो योजना ७ वर्षको भएको हुनाले यो अवधीमा सेयर बजारमा कम्तीमा पनि २ बुल ट्रेण्ड आउने भएकाले एकाइ धनीले योजनाफिर्ता लिँदा अंकित मूल्यको तीन गुणासम्म पाउने सम्भावना रहेको बताउने गिरीसँग बिहीबार बिक्री खुला हुन लागेको एक अर्बको योजनामा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई हुने फाइदा तथा सामूहिक लगानी कोषको सम्भावना तथा चुनौतीका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानी ः
पछिल्लो समयमा सेयर बजार घट्दो क्रममा छ । त्यसको असर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका अधिकांश सामूहिक लगानीको कोषको मूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल झरेको छ । यस्तो अवस्थामा एक अर्बको नयाँ योजना ल्याउन यो समय उपयुक्त हो त ?
सामान्यतः बजारको अवस्थाअनुसार सामूहिक लगानीकोष योजनाहरूको खुद सम्पत्ति घट्ने र बढ्ने हुन्छ । समय कुन उयुक्त हो र कुन होइनभन्दा पनि बजारमा अवसर जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ । त्यसैले सबै समय उयुक्त हो भन्ने लाग्छ । त्यसका साथै पछिल्लो समयमा केही सामूहिक लगानीकोष योजनाका एकाइहरूको मूल्य अंकित मूल्यभन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ । तर, ती सबै योजनाहरूको खुद सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिएकाइ १० रुपैयाँभन्दा तल गएको छ जस्तो लाग्दैन । यसभन्दा अघि सञ्चालनमा रहेको सिटिजन्स म्युच्युअल फन्डको पहिलो योजनाको अहिलको खुद सम्पत्ति मूल्यांकन ११ रुपैयाँभन्दा माथि छ । अहिलेको सेयर बजारको अवस्थाअनुसार हामीले धेरै राम्रो व्यवस्थापन गरेको हो । अहिले दोस्रो बजारमा सूचीकृत सामूहिक लगानीकोष योजनाहरूमध्ये सिटिजन्स म्युच्युअल फन्ड १ अग्र स्थानमा छ । यसले गर्दा पनि दोस्रो योजना व्यवस्थापन गरेर एकाइ धनीलाई उयुक्त प्रतिफल दिन धेरै चुनौतीपूर्ण होला जस्तो लाग्दैन ।
पछिल्लो समयमा सामूहिक लगानी कोषका योजनाहरू सहज बिक्री भएको देखिँदैन, एकाइ बिक्री गर्न कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
सिटिजन्स म्युच्युअल फन्डको दोस्रो योजनाको बिक्री खुला भोलि बिहीबारदेखि छिटोमा १३ गते सोमबारसम्म हुनेछ । यो अवधिमा पूरा बिक्री नभएको खण्डमा एक महिनाको अवधि अर्थात असार ८ गतेसम्म बिक्री खुला हुन्छ । हामीे यो योजनामा साना–साना लगानीकर्ता तथा संस्थागत लगानीकर्तासम्मलाई बुझाउने प्रयास गरेका साना लगानीकर्ता तथा संस्थागत लगानीकर्तासम्मलाई बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
त्यसका साथै बैंक, बिमा कम्पनी तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग सहकार्य पनि गरेको हुनाले बिक्री गर्न समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसमा हामीले धेरैभन्दा धेरै साना तथा सेयर बजार नबुझेका मात्र नभई जोखिम लिन नसक्ने लगानीकर्तालाई सामूहिक लगानी बुझाएर लगानी गर्न प्रेरित गरेका छौं ।
सामूहिक लगानी कोषमा जोखिम कम गर्नका लागि लगानी गर्ने हो । त्यसो हुँदा प्रतिफल पनि थोरै हुने भयो नि ?
उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल पनि उच्च हुन्छ र न्यून जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल पनि न्यून हुन्छ भनिन्छ । तर, जोखिम व्यवस्थापन गरेर सानो रकमले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सहज छैन । त्यसका साथै बजार तथा आफूले लगानी गर्ने सेयरको पर्याप्त विश्लेषण क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । सामूहिक लगानीकोषमार्फत लगानी गर्दा बजारसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञानको जरुरी हुँदैन । त्यसका साथै सेयर बजारमा अप्रत्यक्ष रूपमा सामूहिक लगानी कोषमार्फत लगानी गर्न सकिन्छ । सानो लगानीका लागि कम्पनी तथा बजार विश्लेषण गरेर लगानी गर्न सम्भव नहुन सक्छ । तर, सामूहिक लगानी कोषले संस्थागत रूपमा लगानी गर्ने तथा बजार र कम्पनीको विश्लेषण गर्न छुट्टै अनुसन्धान बनाएर काम गर्छ, जसले गर्दा लगानीको निर्णय लिन सहज हुन्छ । महँगो सेयरमा सानो रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्दैनन् । तर, कोषले त्यो गर्न सक्छ, जसले गर्दा महँगो सेयर मूल्य भएका कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा प्रतिफल पनि धेरै बुक गर्न सकिन्छ । त्यसकाले पनि सामूहिक लगानी कोषमार्फत लगानी गर्दा उयुक्त हुन्छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा जोखिम सीमित गरी बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने पुँजी बजारको माध्यमका रूपमा विश्वभर नै म्युच्युअल फन्डलाई लिने गरिएको हो ।
यो योजनामा लगानी गर्ने एकाइ धनीलाई कुन अनुपातमा प्रतिफल दिने योजनामा बनाउनु भएको छ ?
सामूहिक लगानीकोष नियमावली, २०६७ बमोजिम योजनाको प्रतिफल पहिलेनै सुनिश्चित गर्न पाइँदैन । पहिलो योजनामा कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत प्रतिफल दिने अवस्थामा पुगेका छौं । अहिले बजार घट्दो अवस्थामा छ । आगामी दिनमा बजार बढ्छ । हाम्रो दोस्रो योजनाको पैसा आउँदासम्म बजार सुधारको गतिमा जाने देखिन्छ । दोस्रो योजनाको रकम धितोपत्र बजारमा परिचालन गर्न उपयुक्त समय पनि बनेको छ ।
हाम्रो योजना ७ वर्षको हो । यो अवधिमा बजारका २ वटा बुल टे«न्ड आउने सम्भावना धेरै छ । २ वटा बुल ट्रेन्डमा लगानीको प्रतिफल बुक गर्दा कम्तीमा पनि एकाइ धनीले लगानी गरेको भन्दा तेब्बरसम्मको सम्पत्ति फिर्ता पाउँछन । त्यसका साथै एकाइ धनीले हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतको प्रतिफल पाउने सम्भावना देखिन्छ ।
योजनाले संकलन गरेको रकम कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ ?
हामीले सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको रकमको १० प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्छौं । त्यसपछिको अर्को १० देखि २० प्रतिशतसम्म डिबेञ्चर तथा बन्ड निश्चित आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । बाँकी रहेको ७० प्रतिशत रकम प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी गर्छौं । साधारण सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले ५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको हुन्छ । त्यसले पनि सामूहिक लगानीकोषका लागि थप सकारात्मक पक्ष छ । प्राथमिक तथा दोस्रो बजार वित्तीय औजारहरूमा बजारको अवस्था र योजनाको प्रतिफल बढीभन्दा बढी होस् भन्ने हिसावले लगानी संरचनामा केही परिवर्तन गरेर लगानी व्यवस्थापना गर्ने योजनामा छौं ।
यो योजनामा नै लगानी किन गर्ने ?
हामीले ठूला लगानीकर्ता मात्र नभई सानोभन्दा सानो लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर सहभागी गराउँछांै । धितोपत्र बजारसम्बन्धी ज्ञान कम भएका, जोखिम लिने क्षमता नभएकाले लगानीकर्तालाई लगानी गर्न यो योजना नै उयुक्त माध्यम हो । यो योजनाको रकम धेरै क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले कुनै एक कम्पनीको सेयर घट्दैमा नोक्सानी नै हुने सम्भावना हुँदैन । लगानीमा विविधिकरण गरेर व्यवस्थापन गरिने भएकाले यो योजनाको प्रतिफल पनि निश्चित जस्तै छ । जोखिम बिना उयुक्त प्रतिफलका लागि यो योजना उयुक्त छ ।
#तीन गुणासम्म फिर्ता
सहकारीका सदस्यले पनि बैंकसरह सेवा पाउनुपर्छ
राज्यको पुनर्संरचनासँगै सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएसँगै सहकारीको नीति–नियम तर्जुमा गर्ने भूमिकासहित सहकारी विकास